संसारका दोस्रो धनी ब्यक्ति भन्छन – सुझाव दिनुस, यति धेरै सम्पति कसरी दान गरौं?
संसारका दोस्रो धनी ब्यक्ति तथा अम्याजन कम्पनिका फाउण्डर जेफ बेजोसले गएको शुक्रवार एक ट्वीट गर्दै संसारभरीका आफ्ना फलोवर्स तथा बिज्ञहरुलाइ सोधेका छन ‘अब सामाजिक सेवामा आउन चाहन्छु। म सँग भएको यति धेरै सम्पति असल प्रयोजनकालागी दान कसरी गरौं मलाइ सल्लाह दिनुस।’
आफुसँग भएको सम्पति मानविय सहयोगका लागी कसरी र कहाँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ यस बारेमा सल्लाह दिन उनले ट्वीटर मार्फत आग्रह गरेका छन।
फोर्वस म्यागेजिनले सार्वजानिक गरेको सूची अनुसार सन २०१६ मा संसारका सबैभन्दा दोस्रो धनी ब्यक्तिका रुपमा उनको नाम सार्वजिनक गरको हो। उनको जम्मा सम्पति ७६.२ बिलियन डलर रहेको छ।
सन १९९४ मा बेजोसले अनलाइमार्फत किताव बिक्रिकालागी सुरु गरेको अम्याजन कम्पनि संसारकै सबैभन्दा छिटो सफल भएको अनलाइन बिक्रेताका रुपमा स्थापित भएको थियो। प्रतिवर्ष १०० बिलियन डलरको ब्यार रहेको अम्याजन कम्पनिको १७ प्रतिसन सेयर बेजोसले राखेका छन्। अम्याजनको जम्मा सम्पति ४३० बिलियन रहेको छ।
गएको साता अमेरिकाको ग्रोसरी स्टोर होलफुडलाइ अम्याजनले किने लगत्तै बेजोसले टवीट गरेर आफ्नो यति धेरै सम्पति मानविय सहयोगमा लगाउन इच्छुक रहेको र यसका लागी सल्लाहको समेत आग्रह गरेका छन्।
क्युवाका सोतेला बाबु र आमा र हुर्ककीएका बेजोसको अर्को सपना अन्तरिक्षमा यात्रु लैजाने रकेट निर्माण गर्नु पनि हो। अन्तरिक्षयात्राकालागी योजना बनाइरहेका बेजोसले ब्लु ओरिजिन मार्फन यात्रु ओसार पसार गर्ने रेकेटको निर्माणमा काम समेत गरिरहेका छन।
बेजोसले सन २०१३ मा २ सय ५० मिलियनमा वासिंटन पोष्ट खरिद गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार ४, २०७४ ०२:५१:५६
‘अमेरिकी सरकार शटडाउन’ भनेको के हो?
निरंकुस बन्दै सामाजिक सञ्जाल
कस्तो हुनुपर्छ आर्थिक समृद्धिको रणनीति?
जाग नेपालीहरु हो…, जाग! डा. केसीको सत्याग्रहमा जाग
न्युयोर्कस्थित ट्रम्प टावरमा आगलागी